Dukaan | oo leh Visa + Work + Adeegyada CV ee loogu talagalay qurbaha
Shaqo oo ku noolaada dibedda
Ka xulo Magaalooyinka Ugu Koreeya ee Koraan Dunida!
Ma Dooneysaa Inaad Bilaabto Nolol Wanaagsan?
Meelaha ugu wanaagsan adduunka ee khibradaha safarka
Dukaan - Shirkadda Magaalada Magaalada Dubai
Ku keydi Visa + Shaqo + CV oo loogu talagalay Waxyeelooyinka. Fadlan dooro meesha kuugu habboon adiga !. Maaddaama aan haysanno kumanaan shisheeye oo guud ahaan ka hadlaya, ka Hindiya iyo sidoo kale Pakistan iyo Sacuudi Carabiya. Waxaan hadda siineynaa adeegyo cajiib ah dhammaantood. Marka, fadlan hoos u eeg waxa ay Shirkadda Dubai City ay kuu samayn karto. Socdaal ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad hesho macluumaad faahfaahsan si aad shaqo u hesho. Si kastaba ha noqotee, Shirkadda Dubai City ee bixisa Tilmaamaha socdaalka. Hoos waxaa ku yaal Visayaga oo ay weheliso shaqada iyo dabcan adeegyada caymiska shaqada.
Waxaan rajeyneynaa inaad dooran doontid wadankaaga ugu fiican. Liiskayaga, waxaad yeelan doontaa bartilmaameed heer sare ah oo lagu noolaado laguna noolaado ajnabi. Marka, tusaale ahaan, waxaad u guuri kartaa Jordan sidoo kale Sacuudiga, Mareykanka iyo Boqortooyada Midowday.
Sidee loo adeegsadaa Dukaamadeena?
Waa inaad ka fakartaa wadankaaga ugu fiican ee aad ku noolaan lahayd. Markaa waa inaad doorataa Visa-gaaga waxaadna ka iibsan kartaa adeegyada kooxdayada. Kadib dhinaca togan, kooxdeena ayaa daryeeli doonta howshaada dib u dejinta. Marka, waa inaad doorataa oo ka iibsato fiiso shirkadayada. Markaa ka dib kooxda khubaro ah oo ka tirsan Shirkadda Dubai City ayaa inta hartay waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka ah ka caawiya sidii aad u noqon lahayd qof jooga Imaaraatka Carabta.
Visa Bariga Dhexe oo ay la leedhay shirkadda magaalada Dubai. Marka guud ahaan marka la hadlayo waxaad fursad u heli kartaa in laguugu casuumo mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan iyo kuwa ugu caansan ee Bariga Dhexe. Shirkadeena waxay ka caawineysaa shaqaalaha shisheeyaha inay shaqo ka helaan Kuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirate Lebanon iyo xitaa Falastiin. Marka si guud u hadlida hadaad raadineyso inaad fiiso ku hesho mid ka mid ah wadamada ugu caansan iyo mid kamid ah meelaha ugu fiican ee shaqada lagana baxo qoyskaaga iyo sidaad u maleyneyso. Waxaad xulashadaas ku lahaan lahayd Dubai si aad u hesho fursad shaqo.
Ka shaqee Bariga Dhexe! Dib u deji Maanta!
Marka, haddii aad tahay shaqaale ajnabi ah oo aad raadinayso inaad fursad wanaagsan ka hesho Bariga Dhexe. Shirkad ku taal magaalada Dubai ayaa caawinaysa dadka ka socda Pakistan Sacuudi Carabiya. Waxaa intaa dheer, Dubai iyo xitaa dalal shisheeye sida Kuweyt iyo Lubnaan. Waxaan ka caawineynaa dadka oo dhan wada helida iyo qabashada shaqooyinka maamulka maaraynta shaqooyinka caadiga ah iyo shaqooyinka buluuga ah. Marka waxaan u joognaa inaan kaa caawinno inta ugu badan ee aan awoodno si aan u noqonno qof shaqo doon ah oo guuleysta annagoo ku siinayna fursadaha Visa ee waddankaagii aad dooratay. Waxaad haysataa ikhtiyaar inaad ka doorato waddamada heerka sare lagu soo qortay ee shaqaaleysiiya lacagaha.
Waxaan rajeyneynaa inaan ku aragno Dubia ama Abu Dhabi. Oo kanina waa waddankeenna ugu weyn ee aan kuu dhigi karno oo aan ku siin karno Visa.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad amarto Visa. Ka dib ku dar fiisadaada gaadhiga. Markaa lacag bixin. Ka dibna u duulo halkaad dooratay. Intaas oo dhami waxay noqdeen shaqo raadin guul leh.
Wax alla wixii kale oo aad u baahan karto (97)
Dubbiyada Dubai (76)
Raadinta Shaqada (1)
dharka muslimka ah (158)
Xaraashka Boorsada Safarka iyo Suitcase (264)
Visa ilaa Bariga Dhexe (15)
dharka shaqada (38)